Safal Khabar - किन सल्किन्छन् विवाहित पुरुष पराई स्त्रीसँग ?
किन सल्किन्छन् विवाहित पुरुष पराई स्त्रीसँग ?
आइतबार, २२ भदौ २०७६, २० : ४७
काठमाडौँ । विवाह पश्चात पुरुष होस् या महिला तेस्रो व्यक्तिसँग सम्बन्ध गाँस्न पुगेका खबरहरु हाम्रो समाजमा निकै नै आइरहेका हुन्छन् ।
विवाहित पुरुष वा महिलाले शरीरिक वा मानसिक रुपमा परपुरुष वा परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँस्नु कदापि राम्रो होइन । तर पनि यो सबै थाहा भएर पनि किन आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई धरापमा पुर्‍याउँछन् त मान्छेहरू ?
पुरुषहरुले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्नुका केही कारणहरुबारे तल चर्चा गरिएको छ :रोमान्सका लागिवैवाहिक जीवनमा पुरुषहरु चाँडै नै कुनै न कुनै चिजबाट बोर हुन्छन् । जसले गर्दा दाम्पत्य सम्बन्ध बाहेक जिन्दगीमा नयाँ रोमाञ्चकताको लागि परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँस्न पुग्छन् ।
तर बिर्सिन्छन् कि यसबाट उनीहरुको जीवनमा ठूलो आँधिबेरी आउनेछ ।बोरिङ सम्बन्धविवाहपछि घर-परिवार र बच्चाहरुको जिम्मेवारीका बीच दम्पतीहरू एक-अर्कासँग प्रशस्त समय बिताउँन पाउँदैनन् । यसबाट सम्वन्धमा खल्लोपना र गह्रुङ्गोपना सुरु हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कैयौं पुरुषहरु परस्त्री प्रति आकर्षित हुन्छन् ।साथीहरुलाई रवाफ देखाउनविवाहित पुरुषहरु साथीसंगतीको उक्साहटमा पनि परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न पुगी रहेका हुन्छन् । पत्नीप्रति बफादार पुरुषलाई साथीहरुले ‘जोइटिंग्रे’ भनेर गिज्याउँने पनि गर्छन् । त्यसबाट पनि उनीहरुलाई अफेयर राख्ने हौसला प्राप्त हुन्छ ।